श्रीमती गर्भवती हुनसाथ श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गर्ने अचम्मको गाउँ !
एजेन्सी, १४ साउन । माथि पढ्नासाथ तपाईलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ । जब श्रीमती गर्भवती हुनसाथ श्रीमान्ले किन अर्को विवाह गरिहाल्छन् भनेर ? साँच्चै भन्ने हो भने माथिको शिर्षक पत्याउन पनि गाह्रो हुनसक्छ ।
तर यो सत्य हो । भारतको राजस्थानको केहि गाउँहरुमा अझै पनि यस्तो चलन कायमै छ । महिलाहरुले जानी जानी नै दोस्री या तेस्री श्रीमतीकोरुपमा सहमतिमै विवाह गर्दछन् त्यहाँ ।
यो प्रथा राजस्थानको बाडमेर जिल्ला अन्तर्गत देरासर गाउँको हो । त्यस गाउँमा पानीको हाहाकार छ । गाउँका महिलाहरुको समय नै चर्को गर्मी होस् या अत्यन्तै चिसो समयमा पनि पूरै दिन पानीको खोजीमा भौतारींदै बित्ने गर्दछ । त्यस गाउँका युवतीहरुलाई पनि सानैबाट पानी खोज्न र बोक्न सिकाइन्छ ।
विवाहपछि गर्भवती भएका महिलाहरुलाई दिनभरि पानी खोजेर भौतारिनु र पानी बोकेर घन्टौं हिड्नु खतरा हुने भएकोले गर्भवती भएको थाहा पाए पछि श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गर्ने गर्दछन् । दोस्रो विवाह गरेपछि घरमा पानी बोक्ने मानिस हुनुको साथै गर्भवती श्रीमतीको स्याहारसमेत हुने भएकाले यस्तो प्रथा चलिआएको बताइन्छ ।
राजस्थानको देरासरमा चलिआएको बहुविवाहको यो प्रथा सदियौंदेखि चल्दै आएको हो । महाराष्ट्रको कति गाउँमा पानीकै कारण पुरुषले जानीजानी बहुविवाह गर्न बाध्य भएको बताइन्छ ।
अत्यन्त सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी ल्याउन धेरै गाउँहरु पार गरेर १०–१२ घन्टासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाराष्ट्रमा लगभग १९ हजार सुख्खाग्रस्त गाउँहरु रहेका छन् । यी गाउँहरुमा दोस्रो पत्नीलाई ‘वाटर वाइफ’ भनेरसमेत सम्बोधन गरिन्छ । कतिपय गाउँमा तीनवटासम्म विवाह हुने गरेको पाईएको छ । जहाँ पहिलो श्रीमतीले घर र बालबच्चा स्याहार्ने दोस्रो र तेस्रो श्रीमतीले पर्याप्त मात्रामा पानी बोक्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् ।
धेरैजसो आदिवासी समुदायमा रहेको यो प्रथाको भारतमा निकै विरोध हुदै आएपनि रोक्नभने अझै सकिएको छैन ।
पूर्वमन्त्रीको घरमा पालेको भैसीले जुम्ल्याहा पाडी पाएपछि… (फोटोफिचर)
सबैभन्दा ठूलो सुनको टुक्रा नदीमा फेला पर्‍यो, मूल्य कति ?
गाउँपालिकाले सामूहिक विवाहका लागि दरखास्त माग्यो
१४ वर्षीया बालिकालाई फकाएर भगाई विवाह गरेपछि…
सर्लाहीमा एक युवतीले गरिन् आफ्नै सौताको विभत्स हत्या
बिरालो मारेको अभियोगमा ३ वर्ष जेल सजाय र ११ लाख जरिवाना
तीन हजार जित्ने होडमा ज्यान गयो
कर्मचारीसँग ‘डेटिङ’ गर्दा मासिक १४ करोडको जागिर चैट
शोकाकुल हुँदै समाधिस्थलमा बसेकी महिला समेत बलात्कारको शिकार बनिन्
आफैंले पालेको अजिङ्गरले ज्यान लियो
एउटा कलमको मूल्य एक लाखभन्दा बढी
तीन जना नेपालीको लिङ्ग काटेर हत्या गरेको आरोपमा भतिजा पक्राउ
यस्ता छन् कुकुरले समेत नागरिकता पाउने देशको केही रोचक तथ्य
यस्तो छ साधारण देखिने यस कुकुरको भयानक वास्तविकता
नेपालकै एकसहित यी १३ रहस्य, जसलाई वैज्ञानिकहरुले पनि सुल्झाउन सकेका छैनन्
यो शहरमा कुकुर छ मेयर, यसरी सम्हाल्छ कार्यभार